Jiro amin'ny lampihazo, jiro mihetsika, hazavan'ny lampihazo - ankoatr'izay
Jiro fahazoan-dàlana avo
Jiro loha mihetsika manasa loha
Taratra araho jiro taratra
Jiro jiro mombamomba azy
Jiro Fresnel LED
Jiro par par
Jiro mijanona hafa
Fanaparitahana 8 * 60W ivelan'ny jiro zoom par
Fitaovana jiro kely sy marobe izay afaka manosika ny famoronana noforonin'ny mpamorona hatramin'ny fetrany. Ny lalao tsirairay dia misy 8x60W RGBW LED's, ary azo fehezina amin'ny alàlan'ny protokol DMX na RDM. Ny tena mampisaraka ity lalao ity amin'ny vokatra hafa mitovy amin'izany dia ny fahafahany manala ho azy avy hatrany amin'ny 3.5º-40º ary naoty (IP-65) naoty ivelany.
Rafitra fanidiana sy fampiharana fitambarana
Izy io koa dia miaraka amina fanantonana mihidy izay afaka manatevin-daharana ny famolavolana maro mba hamoronana fitambarana maro isan-karazany toy ny takelaka blinder, filaharana mitsivalana / marindrano ary manome ny fahafahan'ny mpisera piksela mpampiasa. Izany dia mahatonga azy io ho vokatra be dia be azo ampiasaina ho toy ny jiro, strobera, bara, na spotlight mapping pixel. Farany, ny habeny mifintina sy ny fananganana goavambe dia mamela ny Z68 hampiasaina na aiza na aiza. Manaiky ihany koa ampanjifaina amin'ny jiro.
Hijery misimisy >>
Tombony ho an'ny orinasa
Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited, dia mpamokatra jiro dingana matihanina any Shina. Manana mpanamboatra jiro mandritra ny 10 taona mahery miaraka amin'ny traikefa mahaleo tena R&D, manana rojom-bolo feno amin'ny fitaovana fanaovan-jiro, manana ny vokatra andiany WASH feno indrindra amin'ireo mpamokatra ao Shina.
Manana jiro haingam-pandeha avo lenta sy farany namboarina izahay, miahy ny fitantanana kalitao ary serivisy aorian'ny varotra, manome vokatra maharitra 2 taona ny vokatra. Ireo vokatra ampiharina amin'ny seho amin'ny fahitalavitra, kaonseritra mivantana, fiangonana, teatra, Fetiben'ny mozika, klioba, hetsika sns. Tetikasa.
Beyond dia manana fiasa 6.000 metatra toradroa, tsipika famokarana 18, isan-taona manodidina ny 5-7 vokatra vaovao natomboka teny an-tsena. Ekipa R&D mahaleo tena misy injeniera 8 ary samy manana traikefa 10 taona mahery amin'ny indostrian'ny jiro fanabeazana.
Mizahà fitaovana ankoatra ny jiro
Maherin'ny 10 taona ny jiro tsy miankina R & D traikefa, ny teknolojia vokatra dia eo ambanin'ny fenitra tsenan'i Eoropa, fiaraha-miasa matanjaka amin'ny marika & traikefa an-tsehatra lehibe.
2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsika loha l ...
25x40W Magic Panel Matrix zoom head dia manana ...
M52-farany hazavana dingana mahery 24 * 60W Led b ...
F800-9 * 60w andry sy bara fanasana mihetsika jiro wi ...
Z68-fampiroboroboana lampihazo an-kalamanjana zoom par pi ...
12x40W 4-in-1 RGBW nitondra jiro dingana mihetsika
19x15w rgbw 4in1 nitarika fanasana zoom zoom loha
1940Z-King Zoom 19x40W nitarika fanasana loha 4-i ...
760-7x60W borosy manasa sy tantely vokarin'ny maso nitarika Movi ...
660-6 * 60W Pixels fanaraha-maso bara fanamafisam-peo mihetsika h ...
440W beam manasa toerana 3in1 nitarika loha mihetsika miaraka amin'ny CMY
300w hery mahery vaika 3-in-1 namboarina jiro mihetsika
200w nitarika hazavana mihodikodina 3in1
17R 350W 3-in-1 lohan-doha manasa loha
Hot varotra Mini andry mihetsika loha maivana andian-dahatsoratra wi ...
IP65 tantera-drano 1728 × 0.5w rgbw strobo 4in1 ...
Kalitao ivelany IP65 4x200w 800w COB Led b ...
200W COB LED tantera-drano IP65 par fahazavana
2720-IP65 valizy mandro amin'ny rindrina an-kalamanjana ...
F720-Hery lehibe mihetsika manasa zoom zoom outdoor lighti ...
Fampisehoana jiro ankoatr'izay
Fampisehoana jiro fampisehoana loharano feno, mpanome jiro an'ny Olaimpika amin'ny ririnina Korea 2018
Adress: Building B, Taiyangshen Industrial Park, Xiahua 1st Road, Baiyun District, Guangzhou, China
Fampiroboroboana ny indostria